Abenzi bezikhwama nabahlinzeki - E-China wallet Factory
Ama-wallet ama-Ladies wallet elikhulu igobolondo yohlobo lwe-2020 entsha yesikhwama sefoni yeselula yaseKorea
Le wallet clutch enomthamo omkhulu yenziwa nge-PU esezingeni eliphakeme, enempilo futhi enemvelo. Isitayela semfashini, imibala ecebile, ukungena kwamanzi, umswakama-ubufakazi, ukuqina, umuzwa omuhle wesandla futhi kungahlanzwa ngendwangu emanzi.
Isigaba sabesilisa esikhwameni eside sabantu esivele sime mpo isigaba 3 sokugoqa amakhadi wamakhadi amaningi isikhundla esikhulu semfashini isikhwama esisha
isikhumba sekhwalithi ephezulu futhi enobungani bemvelo, isikhumba esingenamanzi, umswakama-ubufakazi, ukuphefumula okulula, isikhwama sokupenda esilula nesitayela, ukuzizwa ukhululekile, izipho zebhizinisi, uhambo lokukhumbula, ukhetho oluhle kakhulu lwezipho zeqembu lokuzalwa.
Izikhwama ezintsha zesikhumba zabesifazane abasha, elula elula yokugqokwa kwemibala
Lesi sikhwama esime mpo senziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu ezinemvelo ze-PU nokuqhathaniswa kombala okwenziwe ngesandla. Umbala ohambelana nombala, imfashini enemibala ehlukahlukene, umhlobiso we-tassel pendant, ukungena kwamanzi, ubufakazi bomswakama, okuqinile nokuqina, ukwakheka okugcwele kuzizwa kukuhle, kungahlanzwa ngendwangu emanzi.
Isikhwama samadoda esikhwameni eside se-zipper wallet yamadoda ejwayelekile
Yenziwe ngesikhumba se-PU sekhwalithi ephezulu. Izwa imnandi futhi ingahlanzwa ngendwangu emanzi. Amanzi angenawo amanzi, aphefumulayo, athambile futhi abushelelezi, nekhwalithi ephezulu.
Isikhwama esisha se-clutch bag esikhwameni eside se-zipper clutch bag esikhwameni samadoda esisebenza ngemisebenzi eminingi
Kukhethwe ngokucophelela i-PU lesikhumba ephezulu. Ukuthinta okuthambile, ukwakheka okugcwele, futhi kungahlanzwa ngendwangu emanzi.
Imfashini Yesikhathi Esisha YamaWallet Amadoda Amakhulu Wallet
Yenziwe ngekhwalithi ephezulu ye-PU, enempilo futhi enobungozi bemvelo. Ikhwalithi enhle kakhulu, ayinamanzi, ingaphefumula, ithinta kahle, futhi ingahlanzwa ngendwangu emanzi.
I-Casual Men's Wallet Long Clutch Bag Zipper Wallet Multifunctional Handbag Yesikhwama Sabesilisa
Imfashini entsha yesikhwama semininingwane yamakhadi amaningi aphezulu ama-3 isikhwama sentsha se-zipper sokuvundla ezithambile
Idizayini enkulu yesikhwama ingakwazi ukufezekisa zonke izidingo. Inezindawo eziyi-8 zokugcina amakhadi wesikweletu, angahlangabezana nezidingo zebhizinisi nsuku zonke, ukuvakasha nokuyothenga.